Sebengu-332 Asebefunyenwe Belegcikwane leCovid 19 eZimbabwe
Umbiko owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle uveza ukuba inani lasebetholakale beleCovid 19, eZimbabwe selikumakhulu edlula amathathu -332. Leli nani lengezwe ngabantu abalitshumi lambili, kwabahlolwe ngoLwesine, Nhlangula 11, 2020. Inengi labo kungabanye babantu abagcinwe endaweni zamaQuarantine Centers, abaphindele ekhaya bevela kweleSouth Africa.
Lumbiko uthi njalo asebehloliwe ukuba baleCovid 19 loba hatshi lokhu laqhamukayo elizweni, ngoMbimbitho lonyaka, sebezinkulungwane ezedlula amatshumi amahlanu-56,746. Asebesinde kulumkhuhlane sebengezwe ngabadabuka eMasvingo ababili, sukuze babengamatshumi edlula amahlanu-51, kwafa abane.
Emhlabeni jikelele asebefunyenwe beleCoronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikombisa-7,493,301, kuthi asebebulewe yileligcikwane, sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane-419,765, kodwa asebesinde kulumkhuhlane sebeyizigidi phose ezine-3,803,543 kubika abenhlanganiso eyeWorldometer.
Emazweni awezwekazi le Africa asebebanjwe belegcikwane leli, sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili-209,438, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye-5,678, kwasinda inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisitshiyagalombili-95,273 kubikwa abenhlanganiso eye Africa union.